Faa'iidooyinka otomaatiga suuqgeynta mobilada | Martech Zone
Mid ka mid ah yoolalka ugu sarreeya ee ururradu waa in la waafajiyo kooxda suuqgeynta iyo iibinta si ay ula xiriiraan una dhexgalaan hawlahooda shaqo si wax ku ool ah. Dhinac marka laga eego, suuqgeyntu waxay u baahan tahay maktabad kheyraadka iyo geeddi-socodka jiilka hoggaaminta, halka iibku u baahan yahay fududeynta dhaqdhaqaaqa iyo dammaanadda iibka ee farahooda. In kasta oo waxqabadyada waaxyadan ay kala duwanaan karaan, haddana weli si aad ah ayey isugu xidhan yihiin. Tani waa halka fikradda ah otomaatiga suuq geynta mobilada yimaado.
Waxaan la shaqeynay kooxda Fatstax, a calaamadeynta iibka iPad-ka, on infographic this, kaas oo siiya ururada shirkadaha barnaamij u oggolaanaya kooxdooda iibka inay si fudud u helaan dammaanadda suuqgeynta iyo kooxda suuqgeynta inay awood u yeeshaan inay u soo rartaan hal meel, sida bakhaar. Abku sidoo kale wuxuu la midoobayaa nidaamyada CRM, si aad si fudud ugu bilaabi karto kobcinta hagaha oo aad u soo qabato macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan raadadka. Fikradda ayaa ah in la siiyo kooxda iibka dhaqdhaqaaqa ganacsiga, iyadoo awood u leh inay si fudud ugu diraan bandhigyada, waraaqaha cad, sawirrada, iwm. Rajada ay qabaan inta lagu guda jiro kulanka iibka, iyo suuqgeynta ayaa ku siin kara iibka noocyada waxyaabaha ay ka wadaagaan khadka tooska ah. Labada kooxba waxaa lagu wargelinayaa waxa la wadaagayo iyo waxa la heli karo, taas oo horseedda wada xiriirka wanaagsan ee shirkadda dhexdeeda iyo rajada laga qabo.
Xogtani waxay ku dhex milmeysaa waxa otomaatigga suuqgeynta moobiilku runti yahay iyo sida ay u beddeli karto habka ururkaagu ugu dhawaado wareegyada iibka iyo suuqgeynta. Waxay sidoo kale bixisaa caawimaad "waqtiga-dhabta ah" inta lagu jiro hawsha iibka. Miyaadan jeclaan lahayn haddii lagu siiyo macluumaad daqiiqado gudahood markaad weydiisato? Tani waa waxa otomaatiga suuqgeynta mobilada loo sameeyay.
Miyaad isticmaaleysaa nooc kasta oo ka mid ah barnaamijyada iibka si aad u hagaajiso waxqabadkaaga iibka? Hadday sidaas tahay, maxay yihiin? Miyaad hore u maqashay wax sidan oo kale ah? Sideed uga shaqeyneysaa "dhaqdhaqaaqa ganacsiga?"
Tags: waafajinta iibka iyo suuqgeyntakooxda suuq geyntaotomaatiga suuq geynta mobiladaKordhinta Iibka
mahadsanid. waa waxtar